ANDRIANONIMANKAJATANY, ANDRIANA TANY ATSIMO
Mpanjaka voalohany tany Vakinankaratra
Ny nakanesany nianatsimo
Andrianony sy Radobay Mpanjaka Vazimba
Ny nangalany ny ody sy ny namonoany an-dRadobay
Niorimponenana tao Andratsay i Andrianony
Nisara-toerana tamin’ny anabaviny roa Ramanjaka sy Razafinompanalina izy
Ny taranaky Ramanjaka
Ny voalazan’ny « Tantara ny Andriana »
Andrianonimanjakantany, natsoina koa hoe Andrianony, no razambe nihavian’Andriamanalinarivo. Lazain’ny lovantsofina fa andriana tetsy Alasora izy. Rehefa niady fanjakana tamin’ny rahalahiny izy dia resy, ka nandositra nianatsimo narahan’ny vahoakany sasany sy ny anabaviny roa dia Ramanjaka sy Razafinompanalina. Lazain’ny sasany kosa fa tsy faharesena ny nianatsimoany fa fifindra-monina tsotra.
Ny nankanesany nianatsimo
Havan-dRatompoindraondriana vadin’Andriamasinavalona hono i Andrianony. Nipetraka tao Vatondrangy izy tamin’ny voalohany. Nianatsimo somary niankandrefana indray izy dia niorina tao Fisakana (angamba Kiririoka). Nianavaratra indray nankany Onive dia niakatra teo an-tampon’i Vatovorona mba hitazana ny manodidina,ka nahita setrok’afo betsaka tery atsinanan’Iavoko telo. Nahafinaritra azy izany toerana be ala sy hetrina eny andrefana eny izany. Nasesiny noresena ny vazimba sady nikisaka niankandrefana izy; ary ny tany nilaozan’ny vazimbatamin’alahelo teo dia nataony hoe Namoizamaso.
Andrianjafimasoandro, isan’ny loholona nanaraka azy avy taty Alasora dia nangataka hijanona hiandry tany eo, ka ny taranany dia mbola eo, atao hoe Andriamasoandro. Samy nalehan’Andrianony avokoa Ambohitsihozona atsinanan’Antsirabe, Manandona, Ianjanina andrefan’i Tritriva; nefa tsy nisy nahatamana azy.
Avy teo an-tampon’Ianjanina no nahitany ny mpaka hoririky Radobay mpanjaka Vazimba teny amoron’ny farihin’Andraikiba, dia mba nankao amin’i Radobay i Andrianony. Gaga izy nahita trano mitafo volomborona. Nolazain-dRadobay taminy fa torahany fantaka ny vorona (vorondrano eo Andraikiba) dia mirarakopana fotsiny. Noveverin’Andrianony fa vokatrin’ny ody maherin-dRadobay Vazimba No tena fototr’izany.
Nivadi-belirano Andrianony, nanao tetika ahazoany ny odin-dRadobay izy, ka nitaona azy hanao velirano hisakaiza. Nanaiky Radobay, ka noborahiny tamin’Andrianony ny tsiambaratelo izay mety hahazoany ilay ody. “Ento ity fantaka ity, hoy Radobay, mankany an’alan’Ankaratra. Atorahy ao anaty ala izy, ka izay hazo hipetrahany no misy ny ody, sady tsy maintsy amonoana olona ho sorona eo ampototr’ilay hazo. Angalao ao arak’izay ilainao amin’ilay hazo.”Itariorio” No atao anaran’izay hazo alaina eo ho ody fitoraham-borona. Dia nahazo “Itariorio” tany Ankaratra Andrianony sy hazo hafa koa atao hoe “Hazomamakizahana” avy tanyTsinjoarivo kosa.
Rehefa tafaverina Andrianony, nahazo ody tany Ankaratra, dia naira-nandeha haka fantaka sy hizaha vorona ao amin’ny farihy ao atsinanan’Iavoko telo, atao hoe Anosy, izy sy Radobay. Nampaka fantaka betsaka izy tany. Nohosorany an’Itariorio avokoa ireo fantaka ireo, ka nony natora-borona dia nahavoa avokoa. Noho ny hafaliany dia nataony hoe”Ialatsara” ily ala any ankaratra izay nahazoany n’Itariorio.
Nozarazarain’ Andrianony tamin’ny loholony ireo ody nalainy tany Ankaratra ireo. Ny tenany nitana ny ody fitorahana. Andriamanjakamanana ny ody havandra, Andriampitoarivo ny ody fanapahana, Andrianjafitoaray ny ody fanidy. Rehefa nody anefa Andrianony dia nanao teti-dratsy hamadika an-dRadobay, hamono azy, fa hoe sao hambaran-dRadobay amin’ny olona hafa indray ny ody efa natorony azy. Dia nasainy niara-nisakafo sy hikorana Radobay, kanjo nony variana iny indrindra dia nohodidininy lamba sy nohodidininy mafy teo ho sempotra dia maty tery. Nony voalevina dia nomeny anarana hoe “Andriamanelisoa”, ary izany no anarana nahalalan’ny maro azy taty aoriana.
Nony nahare ny nahafatesan-dRadobay ny vazimba namany dia raiki-tahotra ka lasa nandositra niankandrefana ary lao monina.
Niorimponenana tao Andratsay i Andrianony. Rehefa resiny ny vazimba dia lasa naka ny vady aman-janany tany Ambohitsimihozona izy aloha vao nandroso niankandrefana. Isan’ny nanaraka azy ny amin’ireo havan’nyTambolafotsy izay tonga andevo taty aoriana, ka nataony hoe ”Angaralahy”. Nitombo fatratra ireo taranaka ireo, ka nomeny anarana hoe “Bibimihoadahy”, ary ny sasany “Tsimandoamamy” (Tsimandoa).
Samy notetezin’Andrianony avokoa ireo tendrombohitra manodidina an’i Betafo, dia Mahatamoana, Vohimalaza, Vorombola, Ingena, Vohibe, saingy ny nahatamana azy dia Ifiva (Ifivavahana) izay nataony fipetrahana raha marary, sy Faliarivo izay teo afovoan’ny fanjakany ary Ivorombola izay nataony fitsangatsanganana.
Nisara-toerana Andranony telo mianadahy : tao Amboavoa andrefan’i Betafo no nisarahan’izy telo mianadahy. Namono osy teo Andrianony; notapahiny roa ilay osy, ka ny tapany aloha nomeny an-dRamanjaka anabaviny iray, ary ny tapany aoriana ho azy .
Razafinompanalina anabaviny faharoa dia tsy nahazo anjara ka nalahelo mafy dia mafy. Natao hoe Amboavoa ny toerana namonoana ilay osy natao orimbato fizaran-tany, satria voasasaka mbamin’ny voan’ilay osy teo ampamonoana ilay osy. Razafinompanalina dia niantsinanana, ka nioromponenana tao Vohitrambo, vao niverina tao Fisakana, ary ilay toerana nitomaniany dia raikitra anarana hoe: “Izafingidina”, ao avaratr’Ibity.
Nisy zanany mianadahy izay iray reny dia Andrianotsoahinarivo sy Ramanalimponilanitra
Nandeha nonina tany Menabe (Sakalava) Andrianotsoahinarivo, ka niteraka an-dRaijoby. Raijoby niteraka an-dRafolahy. Inty indray niteraka an-dRamasoandro. Ramasoandro niteraka an-dRamitrahombolamena (Ramitraho); ao amin’ity anefa dia voalazan’ny tantara fa Andriantsoanarivo (Mikala) no rain-dRamitraho fa tsy it hoe Andriamasoandro. Ramitraho indray dia niteraka an-dRasalimo, izay nentin-dRadama I ho vadiny fony zy tany.
Ilay Ramanalimponilanitra zanakavavin’Andrianony dia niteraka an’Andriantomponandratsay sy Ramanalinjakandrianony (vavy). Ny tarana-dRamanalimponilanitra dia nanjaka teo Andratsay afovoany.
Ny zanak’Andrianony iray reny dia hafa kosa indray dia Andriantsitakatrandriana ary Andriamanalimbetsileo.
Mifotopotra Andrianonilanjakatany sy ny anabaviny Ramanjaka ny tantaran’ny andriana any Vakinankaratra.
Ny antsinan’Amboavoa – dia Andrianonitomponiloharano sy Ramanalimponiandratsay tao Ambohitrandrainarivo – dia tarana-dRamanjaka. Ny tao andrefana kosa dia taranak’Andrianony. (Firaketana, litera “A” boky II p.145)
Araka ny voalaza ao amin’ny TA (p. 630) dia teny Ambohimahatakatra atsimon’i Mantasoa sy Ambohinandranambo sy Vatondrangy no nitoetra Andrianony telo mianadahy alohan’ny nianatsimoany (fa tsy Alasora araky voalazan’ny Firaketana).
Voalazan’ny TA (p.631) fa Andriantsimitoviaminandriana sy Rafononitany no nahery ary izy mirahalahy ireo no nizara ny faritany atsimo. Rafononitany no tompon’ny tany atsinanana, teo Ambohitsimihozo sy teroa Mananara, ary Andriantsimitoviaminandriana no tompon’ny andrefana.
Andriantsimitoviaminandriana teo Ambohitrandraina dia niteraka telo mianadahy : Andriambefetrika sy Andriamanalina ary R…anabavin’izy mirahalahy. Ary ny anabavin’izy mirahalahy niteraka an-dR…vadin’Andriamaroanaka.
Andriambefetrika maty talohan-drainy ka Andriamanalina no nanjaka ka tompon’ny andrefana rehetra. Ranavalona avy any Ambohijanaka no vadin’Andriamanalina nitoetra teo Manandona. Ranavalona no niteraka an-dRazanabahoaka ary ity farany no niteraka an-dRambelosalama.
Ratsivinda rahavavin-dRanavalona ary anabavin’Andriandahimbolamena dia vadin-dRamasoandro mpanjaka Sakalava andrefana.
Voalaza fa niteraka an-dRabodo Ratsivinda. Rabodo no niteraka an-dRamitraho. Tsy hiresaka lava an’Ambohijanaka isika fa tiana no milaza fa Andrianamboavolaniray izay terak’Ambohijanaka no nirahin’i Nampoina hamita an’i Vakinankaratra ka nahazo fanjakana any Masoandro avaratr’i Mania